Batocera Linux: အခမဲ့နှင့် Open Source Retro ဂိမ်းဖြန့်ဝေခြင်း Linux မှ
Batocera Linux: အခမဲ့ Open Source Retro ဂိမ်းဖြန့်ဝေသည်
Linux Post Install လုပ်ပါ | 22/09/2021 06:00 | ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ကိုစူးစမ်းမည် GNU / Linux Distro ပို၍ ဦး တည်သည် Linux ကိုအပေါ် gamingဆိုလိုသည်မှာကစားနည်းများနှင့် GNU / Linux တွင်ကစားပါမရ။ ၎င်းကိုဤအမည်အားဖြင့်သိသည် "Batocera" Linux ကို.
"Batocera" Linux ကို အခြားသူများထက်ထူးခြားသည် GNU / Linux Gaming Distros များစွာကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ရန် console applications များ၊ ပလက်ဖောင်းများ နှင့်သက်ဆိုင်သော applications များ အတုယူခြင်းမရ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အခြားသူများသည် Steam အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့ကိုပေးရန် (သို့) တပ်ဆင်ပြီးသို့မဟုတ်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သောအခြေခံသို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်ဂိမ်းများကိုထည့်ရန်ရွေးချယ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အချို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်စိတ် ၀ င်စားသူများအတွက် ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ အကြောင်းအရာများနှင့် Distros GNU / Linux Gamers များ နှင့် GNU / Linux ရှိဂိမ်းများဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးရင်အောက်ပါလင့်ခ်တွေကိုသင်ကလစ်နိုင်ပါတယ်။
"ChimeraOS ကမင်းပဲSteam Big Picture ကိုအခြေခံသောကွန်ပျူတာဂိမ်းများအတွက် Operating system ဆိုလိုသည်မှာကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားခြင်းကိုအကွက်ကျကျပံ့ပိုးပေးသော Operating System တစ်ခုဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် Steam Big Picture သို့တိုက်ရိုက်စတင်သည်၊ ထို့ကြောင့်မည်သူမဆို Steam အားထောက်ခံသည့်ခေတ်မီသောသို့မဟုတ် retro ကစားခြင်းကိုစတင်ကစားခွင့်ပြုသည်။"။ ChimeraOS: Steam နှင့်ကွန်ပျူတာဂိမ်းများအတွက်စံပြ GNU / Linux Distro
1 Batocera Linux: Console များ၊ Platform များနှင့် Emulators များ
1.1 Batocera Linux ဆိုတာဘာလဲ။
Batocera Linux: Console များ၊ Platform များနှင့် Emulators များ
Batocera Linux ဆိုတာဘာလဲ။
"Batocera" Linux ကို မိမိအခုနှစ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအောက်ပါအတိုင်းအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။
"Batocera.linux သည်အခမဲ့၊ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် retro ဂိမ်းဖြန့်ဝေမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဂိမ်းတစ်ခုတွင်အမြဲတမ်းသို့မဟုတ်မည်သည့်ကွန်ပျူတာ / nanocomputer ကို game console တစ်ခုသို့အမြဲတမ်း (သို့) ဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လုံး ၀ လွတ်လွတ်လပ်လပ် open source retro ဂိမ်းဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်။ Batocera.linux သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မည်သည့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှမလိုအပ်ပါ။ ဥပဒေနှင့်အညီသင်ကစားသောဂိမ်းများ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်ရမည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။"
၎င်း၏အဓိကအကြား ဇာတ်ကောင် အောက်ပါထင်ရှားစွာပြ:
အစွမ်းထက်ဂိမ်းဆော့ဝဲများအစုံကစားရန်အကောင်းဆုံး game emulator များနှင့် kernels များပါဝင်သည်။
အပြည့်အဝပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်: ၎င်းသည် ၁၀၀% open source ဖြစ်သောကြောင့်၎င်း၏အကြောင်းအရာအားလုံးကိုလွတ်လပ်စွာရနိုင်သည်။
သုံးရန်နှင့်ကစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ: အဓိကသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးသောပြင်ဆင်မှုများမလိုအပ်ပါ။ အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည် download လုပ်ရန်၊ မှတ်တမ်းတင်ရန်၊ ပြေးရန်နှင့်ကစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, "Batocera" Linux ကို လက်ရှိကသူ့အဘို့အသွား 31/18/06 ၏ဗားရှင်း 21အခြားအပြောင်းအလဲများတွင်ထည့်သွင်းထားသောအောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။
Xemu, x86_64 အတွက် Xbox Emulator
အနာဂတ် pinball (x86_64)
flatpak (x86_64) အတွက်အထောက်အပံ့
Watara ကြီးကြပ်ရေး Emulator
Odroid Go Advance / Odroid Go Super ရှိ Libretro-melonDS အက်ပလီကေးရှင်း
rpi4 အတွက်နောက်ထပ် overclocking options များ
လွတ်လပ်သော Mame Bezels
OpenGL ၌ Vulkan နှင့် LR-Mupen64plus ပြင်ဆင်မှုများအတွက် Shaders libretro
Gamecube adapter အထောက်အပံ့
စပိန်ဘာသာစကား (Es) တွင်လွတ်လပ်သော emulators များ၏ရွေးချယ်မှုများ၏ပုံသေပြင်ဆင်မှု
မသန်စွမ်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက သင့်အကြောင်းသင်စူးစမ်းနိုင်သည် တရားဝင်ဆိုဒ် en GitHub, ဝီကီ, ဘ‌‌လော့ခ်.
"Batocera.linux သည် buildroot ကိုအခြေခံသည်။ base packages များကိုထိန်းသိမ်းနေစဉ် buildroot ကိုအနည်းငယ်မျှသော Linux ဖြန့်ဖြူးမှုအဖြစ်သင်မြင်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် (firmware ကဲ့သို့) root file systems များတည်ဆောက်ရန် tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ Batocera.linux တွင်အဓိကအားဖြင့် buildroot (emulators, front-end, additional device drivers ... ) နှင့်မရနိုင်သောအပိုပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။" Buildroot အကြောင်းနောက်ထပ်အချက်အလက်များ
အခြား GNU / Linux Distros လူသိများပြီးအသုံးဝင်သည် GNU / Linux တွင်ကစားပါကစားခြင်း၌ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးအတွေ့အကြုံကိုပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဖန်တီးထားသောအချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အခြားသူများကအကြံပြုသည် "Batocera" Linux ကို သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
တိုတိုပြောရရင် "Batocera" Linux ကို နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် Distros GNU / Linux သည် Gamers များအတွက်သင့်တော်သည်အခြားအရာများအကြားတွင်ငြီးငွေ့စရာကောင်းပြီးခက်ခဲသောတပ်ဆင်မှုများ၊ တည်ဆောက်ပုံများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ခြင်းကိုရှောင်သည် ဂိမ်း app များ သူတို့ကိုကစားနိုင်မှ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Batocera Linux: အခမဲ့ Open Source Retro ဂိမ်းဖြန့်ဝေသည်
GNOME 41 သည်ဒီဇိုင်းများ၊ တိုးတက်မှုများ၊ panel များ၊ app များနှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်
PaSh သည် Linux Foundation ၏လက်သို့ဖြတ်သန်းသည်